virus [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/7/7c48b309fdb9fd738a7cf8d9d57fabf9.xhtml failed
Ny fiasan'ny virus
Karazana virus vitsivitsy
Virus dia sombina code na praograma kely manao asa ratsy matetika. Tsy mandeha irery izy fa misy fichier hitoerany aloha. Afaka miampitapita izy avy eo amin’ny praograma hafa.
Betsaka ny toerana mety hahazoana azy : disquette?, mail?, CD ary indrindra ny Internet? (telechargement).
Toy ny virus amin’ny biolojia ihany, Asitriny anatina fichier ny code-ny ka ny programa mampiasa an’io fichier io no mandefa azy.Rehefa mihodina moa io code-ny io dia ahafahany manao ny asa(-ratsy)-ny, sady hitomboany ka hahafahany mandeha mitady fichiers vaovao hidirana indray.
Rehefa mihanaka ny virus dia misy ny soniany no ahafantarany ny fichiers efa voa sy ny mbola mila hasiana. Io soniany io koa no ahafantaran’ny antivirus azy. Efa mandroso be anefa ny teknolojian’ny virus ka ho an’ny sasany dia natao cryptage ilay sonia ka ilay virus irery ihany no mahalala azy. Noho izany dia tsy maintsy nitadiavana fomba hafa hahafahan’ireo antivirus miady aminy. Ohatra, ny fiambenana ny fihetsika (comportement) an’ireo fichiers, programa, processus mihodina, ny fiambenana ny haben’ireo fichiers systemes, sns ...
Maro karazana ny virus, fa ireo voambolana fandre no ireto resahantsika ireto:
Virus de boot: virus manafika ny secteur boot amin’ny kapila henjana. Izy izany no mandeha alohan’ny systeme d'exploitation, ka izay tiany no ataony eo, na ny hamafa ny kapilanao manontolo aza.
Virus macro: ity dia code namboarina tamin’ny macro, izay fitaovana natao hanamora ny asa fanao amin’ireo rindrankajy mahazatra. Ny fichiers office (Word, Excel, Powerpoint sns) moa no tena tratrany.
Ver: (na worm): virus mihanaka amin’ny reseau. Nalaza mihitsy izy tato ho ato niaraka tamin’ny blaster sy Sasser.
Trojan (trojan horse na troyens na cheval de troyes): programa toa tsy maninona, mety ho ianao ihany aza no nametraka azy, kanefa mirakitra fanafihana ny systeme-nao. Ohatra hoe manokatra varavarana hidiran’ny virus, mamoaka donnees sensibles (manampy ny spyware), mamela ny milinao ho afaka baikoana avy lavitra tsy amin’ny ilanao azy, lasa ozinina manao spam (zombie no iantsoana azy amin’izay). Tsy tena virus ny trojan satria tsy mampitombo sy manaparitaka azy ny code-ny.
Fiarovana sy Fanadiovana
virus.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43